Sina: karazana varotra crankshafts Crankshaft sy mpamatsy | SAMOELA
Ny orinasanay dia manana tantara mihoatra ny 30 taona, miaraka amin'ny fitaovana fanodinana mandroso, fomba fitsapana siantifika ary mpiasa manana kalitao avo lenta. Ny orinasa dia manana laza tsara any Guangdong, Xijiang, Jiangsu ary toerana hafa. Manana rafitra serivisy aorinan'ny varotra feno izahay ary manome serivisy haingana sy fikarakarana.
Mamokatra crankshafts maro karazana izahay avy amin'ny Perkins, Renault, Toyota, Volkswagen, Beijing Hyundai, Isuzu, sns. Ny orinasa dia manohy mamokatra vokatra vaovao mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa isan-karazany. Tongasoa eto hanontany sy hitsidika ny orinasa raha mila fitarihana.
Telopolo taona teknolojia famokarana crankshaft matihanina sy traikefa, fitantanana ara-tsiansa sy henjana, fiantohana rafitra tsara kalitao ary serivisy avo lenta aorinan'ny varotra no fototry ny fahazoana ny fahatokisan'ny mpanjifa.
Ny orinasa dia mandray tsara ireo namana sy mpanjifa vaovao sy taloha ao an-trano sy any ivelany mba hanatanteraka fiaraha-miasa ara-toekarena, teknika ary varotra isan-karazany.
Ny fitaovana dia vita amin'ny vy vy nodular mahery vaika ary voatsabo amin'ny alàlan'ny teknolojia fanamafisana ny tany mba hanatsarana ny tanjaky ny havizanana amin'ny crankshaft.Io dia mety amin'ny fiara, sambo, fiara injeniera, milina fambolena, milina mpamokatra, kalitao voalohany, tsara endrika, hakitroky avo, malama, famirapiratana ary mateza aorian'ny famaranana. Ny vokatra tsirairay dia nandalo fitsapana henjana ary azo antoka ny kalitaony. Ny fonosana boaty dia manana endrika tsara sy tsingerina famokarana maharitra: 20-30 andro fiasana, fonosana tsy miandany / fonosana tany am-boalohany, fomba fitaterana: tany, ranomasina ary rivotra.
modely 3E 5E
faharetana amin'ny sintona 700-2 (mPa)
Elongation 2 (%)
Modely azo ampiharina amin'ny fiara Toyota
Haben'ny fonosana 50X16X16
Hery hery 230 (J / c㎡)
Mihena ny fizarana 33 (%)
Mampifandray ny haben'ny loaka 43
Halaviran'ny afovoan'ny tsorakazo mampifandray 43.5 (MG)
Previous: Camshaft avo lenta
Manaraka: Flywheel fiara avo lenta
Engine Casting Crankshaft ho an'ny Perkins135 miaraka ...